မြန်မာ့မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးသမီး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားဇနီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မြန်မာ့မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးသမီး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားဇနီး
မြန်မာ့မျိုးချစ်ခေါင်းဆောင်ကြီးသမီး (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံခြားသားဇနီး
Posted by search123 on Nov 19, 2010 in Drama, Essays.. | 89 comments
ဒေါ်စုရဲ့ မိသားစု ဓါတ်ပုံနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ဓါတ်ပုံကို တွေ့ရတိုင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။
အမျိုးကို တစ်ကယ်ချစ်ပြီး တိုင်းပြည် အတွက် အသက်ပေးခဲ့ ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့အဘိုး ဗိုလ်မင်းရောင် နဲ့ အဖေ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တို့ အစား ရင်နာမိပါတယ်။
ဗိုလ်မင်းရောင်ရဲ့မြစ်တော်စပ်ပြီး၊ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားကို ယူခဲ့ပြီး ၊ ဘို ကပြားလေးတွေ မွေးခဲ့တာဟာ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး တစ်ယောက်အနေ နဲ့ “စောင့်လေမျိုးနွယ်” ဆိုတဲ့
သားသမီး ၀တ် ကို အခြားသူတွေ ထက်ပိုပြီးစောင့်ထိန်း ခဲ့သင့်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မြေးတွေ ကို ဘို ကပြားလေးတွေ ဖြစ်စေခဲ့တာဟာ ဗိုလ်ချုပ်ကိုစော်ကားတာနဲ့ အတူတူပဲလို့မြင်ပါတယ်။
တစ်ကယ်သာ မြန်မာလူမျိုးနဲ့၊မြန်မာပြည်ကြီး ကို ဒေါ်စုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်
မြန်မာလူမျိုးတစ်ယာက်ကို ယူပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အတွက် မြန်မာစစ်စစ်မြေးလေးတွေ မွေးပေးခဲ့ရမှာပေါ့။
ဗိုလ်ချုပ်သာ အခုထိ သက်ရှိထင်ရှား ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊
ှဗိုလ်ချုပ်ရဲ့မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ရှက်စိတ်ကြောင့် ဒေါ်စုကိုမြန်မာပြည်မှာတောင် နေခိုင်းမယ် မထင်ဘူး။
ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီးမို့လို့ လေးစားပါတယ်။
နိုင်ငံရေးကြောင့် မဟုတ်ပဲ မြန်မာပြည်သူတွေ အပေါ် ဘာမှ မမျှော်လင့်ပဲ ကူညီပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် တော်တော် ကောင်းမှာပါ။
(တစ်နည်းပြောရရင် အာဏာကြောင့် မဟုတ်ပဲ ကူညီနိုင်ပါစေ။)
search 123ေ၇
မင်းအမျိုးထဲ မှာေ၇ာ ဘယ်သွေးမှမေ၇ာ ဘူးတဲ.လား
မင်းဆိုလိုတာ အမေ စုကို အာဏာကြောင့် ဒီလမ်းကြောင်းလျောက်နေတယ်ပေါ.၊
မင်းကကော အဲဒီမှာ ကျွန်ခံ နေတာလား
ဒို့ အမျိုးက ဘာသွေးမှ မရောတဲ့ ဗမာစစ်စစ်ပါ။
မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ် အပြည့်အ၀ ရှိလို့သာ ဒီ Post ကိုရေးဖြစ်သွားတာပါ။
မြန်မာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်နဲ့ နိုင်ငံခြားသား တစ်ယောက် လက်ထပ်ဓါတ်ပုံကို
ကြည့်ရတာ လိုက်ဖက်ညီတယ် လို့ သူငယ်ချင်းရောထင်လား?
သို့သော် သို့သော် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦး ၏ သမီး၊ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် စောင့်လေမျိုးနွယ်ဟူသော ကိစ္စအား လိုက်နာသင့်ပါကြောင်း၊ လိုက်နာခဲ့ရင် ပို၍ ကောင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထင်မြင်မိပါသည်။
လာပြန်ပြီနောက်တစ်ယောက်၊ အမိန့်ပေးခံရ ရင်ချေးခြောက်ပေါင်းစုံကို ရေနှုးပြီး အန်ထွက်အောင်စားမဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ်လာပြန်ပြီ။
ဒီရေးတဲ့ ပိုစ်ကို ထောက်ခံတဲ့သူနဲ့ ကန့်ကွက်တဲ့သူ အရေအတွက်ကို ကြည့်ရင် ဘယ်ဟာမှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်ကြရင် ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်။
This is example of democracy in Mandalay gazette ငါ့ညီရဲ့ ။
ဒေါသတကြီး မဖြစ်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်ပြောတယ့်လေသံမှာ နှမြောတဲ့ အသံပါပါတယ်။ (သို့သော် သို့သော် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတဦး ၏ သမီး၊ မြန်မာလူမျိုးဖြစ်သောကြောင့် စောင့်လေမျိုးနွယ်ဟူသော ကိစ္စအား လိုက်နာသင့်ပါကြောင်း၊ လိုက်နာခဲ့ရင် ပို၍ ကောင်းမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ထင်မြင်မိပါသည်။)သူသာ မြန်မာလူမျိုးတယောက်ကိုသာလက်ထပ် ခဲ့ရင် အခုအချိန်မှာ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့ မှဘယ်လိုမှထောက်ကွက်ရှိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ငါ့ညီ မင်းသာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲသူတစ်ယောက်ဆိုရင် လူတွေအားလုံးက သူကံနဲ့သူအကြောင်းနဲ့ ဖြစ်နေရတယ်ဆိုတာကို နားလည်လက်ခံမှာပေါ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လွန် ကာလနောက်ပိုင်းက အခြေအနေတွေက သူ့မျိုးဆက်ကို ဒီအခြေအနေဆီတွန်းပို့လိုက်ပြီး ဖြစ်ခဲ့သွားတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို အခုအချိန်ထိ တသသပြောနေတော့လည်း ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ nobody can reverse the past. you see.
အကောင်းဆုံးက လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲ ကြည့်ဘို့ မကောင်းဘူးလား။
မိဘအမွေကို ကောင်းကောင်းဆက်ခံပြီး တိုင်းပြည် အကျိုးကို မှန်ကန်တဲ့၊ အများလက်ခံတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ရဲရဲဝံ၀ံ လျှောက်နေတဲ့ သူတယောက်ကို အကောင်းအမြင် အတိုင်းကြည့်ဘို့ပဲ တို့ကတော့ စဉ်းစားတယ်။
Nobody is perfect in this world. Everybody has weak points and strong points.
မှန်ပါတယ် ။ သူပြောတာထောက်ခံတယ်။ ဗမာစစ်ပြီး အမျိုး ဂုဏ်စောင့်ပါတယ် ဆိုပြီး ဗမာအချင်းချင်း လမ်းမှာ ဒုက္ခတွေ့ရင်တောင် မသိချင်ယောင်ဆောင်တတ်တဲ့ သူတွေအများကြီးပါ။
အော် သူပြောပြီးသားလေ။ သူက မြန်မာလူမျိုးနဲ့ ယူရအောင် သူနေတဲ့နေရာက မြန်မာနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် အိမ်နီးချင်း မိုိ့လို့လား။ အချစ်ဆိုတာ လူမျိုး ဘာသာ ရှိသလား။ အစွဲကသာ ကြောက်ဖို့ကောင်းတာ။ နောက်တစ်ချက် (ဒီအချက်ကတော့ သိပ်မပြောချင်ဘူး)
သူလို လူနဲ့ သူရထားတဲ့ ဘွဲ့တွေနဲ့ သူ့အဆင့်အတန်းနဲ့ ဒီနိုင်ငံမှာ တန်းတဲ့လူရှိသလား။ (အသက်23နှစ်လောက်မှာ ကုလသမဂ်ဂမှာ အလုပ်လုပ်နေဘီ)
နောက်ဆုံးအချက် ကံအကြောင်းဆိုတာ မြန်မာလူမျိုးတိုင်းသိနားလည်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပြောရရင် Over Comment တောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်က အတိတ်က အရေးမကြီးဘူး။ အနာဂတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ အခုဖြစ်နေတဲ့ လက်ရှိအချိန်ကသာ အရေးကြီးတယ်လို့ ထင်တယ်။ သူရထားတဲ့ ဘွဲ့တွေနဲ့ သူရထားတဲ့ နိုဗယ်လ်ဆုငွေနဲ့သာဆိုရင် အခုလို ဒုတ်ခ ခံပြီးနေစရာအကြောင်း မရှိဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး နေလိုရတယ်။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လူသာဆိုရင်။ အခုသူ့မှာ အဖေသွေး ပါလို့ မြန်မာလူမျိုးတွေကို ချစ်တဲ့စိတ် ခေါင်းဆောင်ကောင်းစိတ် သနားကြင်နာတဲ့စိတ် ရှိနေလို့ အခုလို စိတ်ဒုတ်ခ ကိုယ်ဒုတ်ခ ခံပြီးနေနေတာ မဟုတ်လား။ အခု ဒီမှာ မြန်မာအချင်းချင်းယူထားကြတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ချစ်တဲ့လူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိသမျှ အနှစ်တွေကို ရောင်းစားပြီး အိတ်ထဲ ထည့်နေတာ မဟုတ်လား။ မသိလို့ ငြိမ်နေကြတာမဟုတ်ဘူး။ မပြောချင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဖက်ပြီး မဖြစ်ချင်လို့သာ။ ပြောရရင် ကုန်မှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီတော့ အတိတ်ကိုဘဲ ပြောနေပြီး လက်ရှိကို မမြင်တဲ့ ကိုယ်တော်ကြီး ကိုယ်တော်လတ် ကိုယ်တော်လေးတို့
အခု လူအချင်းချင်းတောင် သွေးစုတ်နေကြတာမဟုတ်လား။ ဘယ်သူက စုတ်နေလဲ။ လက်ညျိုးမလွဲက ဘယ်သူတွေလဲ။ အဲဒါကို ဖုံးပြီး ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ပြောနေတာလဲ။
ဘယ်သူက နိုင်ငံတိုးတင်အောင် ကိုယ့်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး လုပ်နေတာလဲ။ နိုင်ငံခြားသားနဲ့ လက်ထပ်တာ အပြစ်လား။ နိုင်ငံခြားသားကရော လူမဟုတ်ဘူးလား။ သူက ရိုင်းစိုင်းယုတ်မာနေလို့လား။
အထဲခဏခဏဝင်ပြီး လူကိုညင်းဆဲနေတာတောင် ပြည့်သူရှေ့မှာ တစ်ခါမျက်နှာ ပျက်ခဲ့ဘူးသလား။
အခု ပို့စ်တင်တဲ့ လူကရော နိုင်ငံခြားသား မယားတစ်ယောက်လို ကိုယ်ကျိုးစွန့်အနစ်နာခံနိုင်လား ခံရဲလား။ သူများ မကောင်းကြောင်းဘဲ မပြောပါနဲ့။ ကိုယ့်အကြောင်းလည်း စဉ်းစားပါ။ သူများကို လက်ညှိုးထိုးရင် ရှင့်ဘက်ကို လက်4ချောင်းထိုးနေတယ် မယုံရင် လုပ်ကြည့်ပါ။
ကိုင်းဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ပြောမရတော့ ဒဲ့ပြောလိုက်မယ်။ စိတ်ကူးယဉ်နေတာဗျို့ ။ သူ့ မှာ အဲဒီအချက်မရှိခဲ့ရင် ဘယ်သူမှ ဘာမှ ဘယ်ဥပဒေနဲ့ မှ ဒုက္ခပေးလို့ မရတော့ပဲ အခုအချိန်မှာ လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ဂိုးသွင်းရမှာ ရလောက်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီဗျ။ လိုက်နာခဲ့ရင် “ပိုကောင်းခဲ့မည်”လို့ ပြောပါသည်။
အခြေနဲ့နဲ့အချိန်ခါကြောင့်ဖြစ်သွားခဲ့ကိစ္စကိုဘာလို့ပုံကြီးချဲ့ ကာပြောနေကြတာလည်း။ မင်းတို့သာအဲလိုအခြေနေမှာဆို အဲထက်ဆိုးဦးမှာ။ ခုကော့ဘာထူးလို့လည်း၊ နိုင်ငံခြားသားတွေကိုယူနေကြတာပဲ ဘာဖြစ်လို့လည်း၊ အဓိက စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပဲမဟုတ်လား။
2008 အခြေခံ ဥပဒေလား?
အနှစ်နှစ်ဆယ်ဆွဲခဲ့တဲ့ အခြေခံဥပဒေကလဲ ကလေးတွေ စစ်တိုက်တိုင်း ကစား ရင် ချမှတ် တဲ့စည်းကမ်းတွေကျနေတာပဲ
တသွေး တသံ တမိန့် ပဲ အဒီထက် ပိုပြီးမသိတော့ဘူး
ဟေ့ကောင် Search 123 မင်းကဘယ်လောက်သိလို့ဒီပို့စ် ကိုတင်ရတာလဲ၊ မင်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ History ကိုသေသေချာချာလေ့လာသင့်တယ်။မင်းကွာ——————
ဟုတ်တယ် ဒီလိုတော့မပြောသင့်ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်ဒီပို့မှာ ကွန်မန့်ပေးဖို့ကိုအကြာကြီးစဉ်းစားခဲ့တယ်။
ဘယ်လိုရေးရင် အထိရောက်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာ။ ကျွန်တော်တစ်ခုပဲပြောပါရစေ။ အမေစုကမိန်းမသားပါ။
မိန်းမသားတန်မဲ့ ဒီလို ဒုက္ခတွေခါးစည်းခံနေတာပါ။
လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလည်း လုပ်ပါ။ အတိတ်မှာပဲမနေထိုင်ပါနဲ့။
မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆိုတော့ ပြောရအုံးမယ်..။ တစ်ချိန်က အင်္ဂလိပ်အစိုးရက သီပေါမင်းကို တစ်ကျွန်းပို့ခဲ့လို့ သီပေါမင်းရဲ့ သမီးအချို့ဟာ ကုလားတွေနဲ့ ညားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ တိုင်းတစ်ပါးမှာ အနေကြာလို့ တိုင်းတစ်ပါးသားနဲ့ အိမ်ထောင်ကြကုန်ကြတဲ့လူတွေရဲ့ အပြစ်လား..။ မြန်မာပြည်မှာ မနေနိူင်အောင် လုပ်တဲ့လူရဲ့အပြစ်လားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ဒီ post ကို တင်တဲ့ အစ်ကိုခင်ဗျား..ခင်ဗျားမှာ သားသမီးတွေရှိပြီး သူတို့တွေသာ မြန်မာပြည်မှာ မနေရဘဲ တိုင်းတစ်ပါးမှာပဲ နေရမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေ နိူင်ငံခြားသားနဲ့ မယူဘူးလို့ အာမခံနိူင်ပါလား????
မင်းရဲ့ သွေးက မနှောဘူးဆိုတာ သေချာရဲ့လားကွယ်
search 123 ပြောတာကို ထောက်ခံပါတယ်။
ဖခင်ရဲ့ဂုဏ်ကို လေးစားသောအားဖြင့် ကိုယ့်လူမျိုးကိုပဲ ပြန်ယူသင့်တယ်။
ဖခင်မရှိတော့ရင်တောင် မိခင်ဖြစ်သူက ပြောဆိုဆုံးမရမယ်။
ေ၇အိုးထဲခေါင်းနှစ်ပြီး သွားအော်ပါလား…၁၂၃ ရေ….
တစ်ဖက်ကလှည့်တွေး အမေစု ခမျာ သနားစရာပါ၊ ဒုက္ခတွေ ခါးသီးမှုတွေ ခံစားခဲ့ရတယ်၊
စေ့စေ့လေးတွေးကြည့်ပေးပါ၊ သူခံစားရတဲ့ ဒုက္ခမျိုး တွေးပီး ခဏလေး ခံစားကြည့်ပါ၊
ဒီအချိန်ထိနော် အသက်အရွယ်ကိုလဲ ကြည့်ပါဦး၊ ကိုယ်ချင်းစာကြည့်မိရင် ရင်နာပီး
ဖတ်ရတာတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာ။အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရမယ်ဆိုရင် ဘာဘူစောင်ကအနွေးဆုံးပါ(အဲလေ) search123 ကိုတော့သနားတယ်ဗျာ။ဘာကြောင့် အမြင်မကျယ်ရတာလဲလို့။ ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ တရားခံတွေကိုတော့ လက်ညိုးမထိုးပဲ အန်တီစုကို လက်ညိုးလာထိုးတော့ အခုတော့ ခင်ဗျားပဲ ပြန်အထိုးခံရပြီ မဟုတ်လား။အပြင်မှာတော့ အဲလိုမပြောနဲ့ဗျို့ ။ ခင်ဗျားနောက်နေ့ နေထွက်တာ မတွေ့နိုင်အောင်ဖြစ်သွားမယ်။
အရမ်းကြိုးစားခဲ့ပြီး အရမ်းအပင်ပန်း စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရတဲ့ အမေစု ပါဗျာ၊
အမေစု ကျန်းမာပါစေ၊ နိုင်ငံ့တာဝန်များကို အချိန်မီ ထမ်းဆောင်ခွင့်ရနိုင်ပါစေ။
ဖတ်တော့ကောင်းတယ်။ လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်တွေ တော်တော်ပေါ်လာကြတယ်။
အယူအဆမတူတာကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ငြင်းလို့ရပါတယ်။
ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းတော့ မပြောသင့်ကြဘူး ထင်တယ်။
ဒီလိုတွေဆိုရင် နောက် အမြင်တစ်မျိုး ရေးအုံးမယ်ဆိုရင် လက်တွန့်ရတော့မယ်။
အပြစ်ပြောလို့မရပေမဲ့ စိတ်မကောင်းတော့ ဖြစ်စရာပါပဲ။။။။
တစ်ကွက်မှားရင် အစားခံရမှာ တော့ သေချာပါတယ်။
ခြုံပြောရရင် မသိတာတွေလဲ သိလိုက်ရတာမို့ အရမ်းကောင်းတယ်။
ဒေါ်စုက နိုင်ငံခြားသားယူတယ်ဆိုပေမယ့် အခုသူလုပ်နေတဲ့လုပ်ရပ်ကောင်းတွေကို ပြည်သူတွေအကုန်လုံး မြင်တွေ့နေကြတာပဲ.. ဒါချည်းကိုပဲ ကပ်ပီးပြောနေလို့တော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး.. ဒေါ်စုကောင်းလို့ အခုလို အပြောင်းအလည်းဖြစ်လာတာတွေကို သတိပြုမိသင့်ပါတယ်..ဗျာ
ဒီလိုအချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ဘက်ဆီရောက်စေချင်တဲ့ သူတိုင်း ဒီလိုပိုစ်မျိုးတွေ လက်မခံတော့ပါဘူး။
တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် စေတနာထားပြီး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူ မှန်ပါက အားပေးကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
တိုင်းပြည်ကို အမှန်တကယ် စေတနာထားပြီး တိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိသူ မှန်ပါက ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲ အားပေးကူညီ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပေသည်။
ပြည်သူကို တစ်ချက်လေးမှ မငှဲ့ပဲ ပျက်စီးအောင်ဆောင်ရွက်နေသူ မှန်ပါက ဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲ မောင်းထုတ်သင့်ပေသည်။
မိုက်တွင်းနက် တဲ့ ကို ဆားချစ် ၁၂၃
အပြစ်ဆိုတာရှာလေ တွေ့လေ ပဲ။ ခင်ဗျားမှာရှာလည်းတွေ့တယ်။ ခင်ဗျာညီမလေးမှာရှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်။
လူဖြစ်ကျိုးနပ်ဖို့ ဆိုတာ လူနှင့်လူ့ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဘယ်လောက် ကောင်းကျိူးပြုသလဲအပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့နဲ့အိမ်ထောင်ပြုပြု လူတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ပါ။ သူများ အိမ်ထောင် မခိုး ရင် ပြီးတာပဲ။ သူများအိမ်ထောင်ခိုးတဲ့ လူ့အသိုင်း အ၀ိုင်း တွေ မင်း ပတ် ၀န်းကျင်မှာရှာ ကြည့် ဒုနဲ့ဒေးနေမှာပါ။ အခြေခံအားဖြင့် ကံငါးပါး မကျူးလွန်ဘူး၊ အထူးသဖြင့် ရဟန်း သီလရှင် နှင့် လူ ကိုသတ်ခြင်း၊ ဘုရားကိုသွေးစိမ်းတည်အောင်လုပ် ခြင်း သံဃာတွေကိုဂိုဏ်းခွဲခြင်း စတဲ့ ကံတွေကျူးလွန်မှ သာ ထာဝရမလွတ်တဲ့အပြစ်ပါ။
နဖူးစာ ဆိုတာ ဆုံချင်တိုင်းလည်း ဆုံ လို့မရသလို မဆုံချင် ရင် လည်း ဆုံရတတ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် က ညီလေး(သို့) မောင်ဆားချစ်၁၂၃ ထက်တော့ အဆများစွာ သာပါတယ်။
မေတ္တာနဲ့ တည် ဆောက်ထားတဲ့ သူ့ မိသားစု လေး အလဲလဲ အပြိုပြို အဖြစ် ခံပြီး မိခင် ကိုပြုစုဖို့ ပြန်လာရင်း အာဏာရှင်စစ်အစိုးရတွေ ဖျက်ဆီး လိုက်တဲ့ စုတ်ပြတ်သွားတ၊ဲ့ ပြည်ထောင်စု တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံ ကို လာရင်း ကယ်ဖြစ်သွား တာပါ။ ဘယ်လိုကယ်ကယ် ကယ်ဖို့ ပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်။2decades နှစ် နှစ်ဆယ်နီးပါး သားကွဲ လင်သေ အမေဆုံး (အဖေလုပ်ကြံခံရ) အစ်ကို က တစ်မှောက် နဲ့၊ ပြည်သူကလည်း သူ့နောက်လိုက်ချင် ပေ မဲ့ သေနတ် ကြောက် လို့ ငြိမ်နေရတဲ့ ဘ၀၊ ဖြစ်သန်း ရတဲ့ သူ့ ဘ၀ ရင် ထဲမင်း ၀င် ကြည့်စမ်း ရင်တွေဘယ်လောက် ဘလောင်ဆူ နေလိုက်မလဲ။ သည် ကြားထဲ မောင်ရင် ဆားချစ် ၁၂၃ လို အတိမ် အနက် မသိတဲ့ လူတွေ က တစ်ပုံ ချည်းပါ ပဲလား။ Have you ever asked yourself like this,” Have I ever taken pains to save this torn and poverty-stricken Myanmar?”
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ကြီး ဦးသိန်းစိန် လို လူတောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါ် ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် ကို လက်ခံ လာပြီ ။မောင်ရင့် လို မျက်လုံးသေး သေး အမြင် ခပ် ကျဉ်းကျဉ်း အတွေးတိမ်တိမ် လူတော့ စာများများ ဖတ်ပါဦး လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ မောင်ရင် တို့ အိမ် တစ် အိမ် လုံးပေါင်းမှ လေးတန်း အောင်ရဲ့လား။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရ တဲ့ ဘွဲ့တွေ က ငါတောင် မရေ တွက်နိုင် ဘူး။ ပါဆင်နဲယ် (personal) တွေမပြောလိုပါဘူး ဒါ စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်ပဲလေ။ နောက် အပြောအဆို အရေး အသား ဆင်ခြင် ပါကွာ။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာ က တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တွေးတတ် ခေါ်တတ် ခေတ်ပညာတတ် ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ဥာဏ် ကြီးတယ် မင်း သူပြောတဲ့ စကားတွေ သူရေးတဲ့စာတွေ နားပါ ရင် နားထောင်ကြည့်၊ မျက်စေ့ပါရင် ဖတ်ကြည့်၊ ဦးဏှောက်ပါရင် ဆင်ခြင် ကြည့်ပါ။ စေတနာတွေသာ တွေ့ရမယ်။ သူ့စကားနဲ့ သူ့လုပ်ရပ်တွေ အဆိပ် မဖြစ်စေရဘူး။ နိုင်ငံခြားသား အိမ်ထောင်ပြုတာနဲ့ တိုင်း ပြည် ချစ်တာ ဘာဆိုင်လို့လဲ။
မောင်ရင် လဲ သူ့နေရာသာဆိုရင် နိုင်ငံခြားသူ ယူချင်လွန်းလို့ ငန်းငန်းတက် နေမှာပါ။
အမေစုအပျိုအရွယ်မဖြစ်ခင် ကလေးဘ၀ကထဲက အမေစုအမေဒေါ်ခင်ကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ မိခင်ကြီး ဆိုတဲ့ဘွဲ့တပ်ပြီး နိုင်ငံခြားမှာ သံအမတ်လုပ်ခိုင်းထားတဲ့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့အကြံအစည်ကြောင့်လို့ ထင်ပါတယ်… အရွယ်ရောက်လာတဲ့ အမေစုရဲ့ဘေးမှာ မြန်မာတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲ ရှိနေမလဲ???
နိုင်ငံခြားမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတဲ့ မိခင်နောက် လိုက်ရင်း… နိုင်ငံခြားတက္ကသိုလ်တွေမှာ ပညာ သင်ကြားရင်း… တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း… တွေ့နေရတဲ့သူတွေထဲမှာ…………
ရှေးရေစက်ပါလာတဲ့ သူက နိုင်ငံခြားသားဖြစ်နေတာကို အပြစ်ကြီးတစ်ခုလို့ မယူဆချင်ပါဘူးဗျာ…. အမေစု အနေနဲ့ နိုင်ငံခြားသားတစ်ဦးနဲ့ လက်ထပ်လိုက်တာဟာ တိုင်းပြည်ချစ်တာနဲ့ တိုက်ရိုက် မပတ်သက်ဘူးထင်ပါတယ်….
လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ခင်ပွန်းသည်ကို ပစ်ထားပြီး မြန်မာပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ ယှဉ်ထိုးကြည့်ပါ…….
လင်ရော မယားပါ မြန်မာပြည်သားစစ်စစ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ အများကြီးပါ… ဥပမာ… ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်….
သူတို့က မြန်မာနိုင်ငံကို အရမ်းချစ်တယ်လို့ ကြွေးကြော်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံကောင်းအောင် လုပ်တယ်တဲ့…
ဟုတ်ကဲ့…. သူတို့တွေလုပ်တာ ကောင်းသလား… မကောင်းသလားတော့ ခင်ဗျားတို့လည်း အသိပါ…
အချိန်နဲ့ သမိုင်းက အဖြေပေးသွားပါလိမ့်မယ်…. အခုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားလင်မယားစစ်စစ်တွေ မှားယွင်းခဲ့တဲ့အဖြစ်ကြောင့် အရှေ့တောင်အာရှမှာပါ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ………………………………
……….ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ အမှန်အတိုင်း စဉ်းစား ရှုမြင်နိုင်ကြပါစေ……
ဒီကိစ္စကို ၀မ်းတွင်းသားတစ်ယောက်က အန်တီစု ၀မ်းတွင်းကို ဟောပြောပွဲလုပ်တုန်းကထ မေးဘူးပါတယ်။အဲဒီမှာ အန်တီစုဖြေတာရှင်းပါတယ်။ ကျွန်မ၀မ်းတွင်းမှာ ကျောင်းလာတက်ရင် ၀မ်းတွင်းသားနဲ့ ညားမှာပေါ့တဲ့ အဲဒီတခွန်းဖြေသွားတယ်လို့ ဖတ်ဘူးပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို မနှောင့်ယှက်ချင်ပါနဲ့အပြစ်မပြောချင်ပါနဲ့ လား။
ပြောထားတာတွေလည်း များနေပါပြီ တော်တော်လေးလည်း ပြည့်စုံနေပါပြီ အမေဆုကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ် တိုင်းတပါးနဲ့ယူတာကိုလည်း မကန့်ကွက်ပါဘူး သီးချိန်တန်သီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ဆိုသလို သူက နိုင်ငံခြားရောက်နေလို့ဖြစ်ရတာပါ အဲ့ဒါကိုအပြစ်မပြောကြပါနဲ့ သူလုပ်ပေးလို့ခု သမ္မတနိုင်ငံတော်အဖြစ် ပြောင်းလဲလိုက်ပြီမဟုတ်ဘူးလား ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက သူ့ကျွန်ဘ၀ကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကြိုးပမ်းပေးခဲ့ပါတယ် ပြီးတော့မြန်မာတွေက လွတ်လပ်ပေးမရသေးပါဘူး ကိုယ့်ကျွန်ဘ၀ကို ထပ်မံရောက်ခဲ့ရပါတယ် ကိုယ့်ကျွန်ဘ၀ဆိုတာလည်း သူ့ကျွန်တော်ဘ၀နဲ့ထူးမခြားနားပါလို့ပြောခြင်ပါတယ် ကျွန်ကကျွန်ပဲလေ ခုမှတကယ်လွတ်မြောက်တာလား ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးပေါ့ဗျာ အမေဆု မှားတာ တစ်ခုထဲပါ အဲ့ဒါကလည်း သူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုပါပဲ မစွတ်ဖတ်သင့်ပါဘူး နာမည်ပဲတပ်ပြောပါတော့မယ် အုပ်ချုပ်နေတဲ့သန်းရွှေ ဘာအသုံးကျလို့လည်း သူ့အိမ် သူ့နေရာ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်ပဲ တိုးတက်တယ် တခြားနေရာတွေကိုကောကြည့်အုံး ဘာတိုးတက်လည်း ကိုယ်ကပိုက်ဆံရှိလို့ တတားလေးဆောက်ပေးမိပါရဲ့ ဘာနဲ့များပုတ်မတက်ပြီးဖမ်းလည်းမသိပါဘူး ဖမ်းခံလိုက်ရတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လုပ်မယ်ဆိုလည်းမရ သူတို့လုပ်ပေးလားဆိုတော့လည်း မလုပ်ပေး သူသာတကယ်ကောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းတွေကောင်းနေရောပေါ့ဗျာ တခြားဘားမှမပြောသေးဘူးနော် ကျွန်တို့၏သဘောသဘာဝသည် သခင်ကို အလုပ်အကြွေးပြုရအံ ဆိုသလို ကျွန်တော်တို့လုပ်သမျှ အထူးသဖြင့်တောင်သူလယ်သမားတွေ အခွံကိုအစမတန်ပေးဆောင်နေရပါတယ် အဲ့ဒါ ကျွန်တို့ရဲ့သဘောသဘာဝမဟုတ်သေးဘူးလား အခွံပေးရလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ပေးသင့်ပါတယ် ဒါပေမယ့်မတန်သဆမလုပ်နဲ့လေဗျာ ကားသမားတစ်ယောက်မှာဆိုရင် ကားလေးတစ်စီးပိုင်ထားပါရဲ့ ပေးလိုက်ရတဲ့အခွန်တွေ ခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုးကို တက်ပြီးတောင်းတော့တာပဲ သက်တမ်းတိုးတာကတော့ သဘောသဘာဝပဲမလို့မပြောလိုပါဘူး ပြေးဆွဲခွန်ဆိုတာကဘာလည်း လမ်းခွန်ကကောဘာလည်း ဘီးခွန်တဲ့ထပ်ရှိသေးတယ် အမတော်ခွန်ကကော ဘယ်လိုလုပ်မလည်း လမ်းပျက်ရင်လည်း လာပြန်ပြီ လမ်းပြင်ဖို့ဆိုပြီးကောက်ပြန်ရော တနှစ်မှာကားသမားတွေ သူတို့ကိုဘယ်လောက်အလုပ်အကြွေးပြုရလည်း ကားသမားတွေကိုဥပမာထားပြီး သဘောပြောပြတာပါ တခြားတွေလည်းရှိပါသေးတယ် ဒီလောက် သခင်တွေကိုအလုပ်အကြွေးပြုနေရတဲ့ ကိုယ့်ကျွန်ဘ၀ကကော မလွတ်ခြင်ကြတာ့ဘူးလား အမေဆုကို ဆန့်ကြင်သူအားလုံး ကန့်ကွက်သူအားလုံး ဖြေစေခြင်ပါတယ် ပြည်သူလူထုအတွက်အမြဲစဉ်းစားပေးတဲ့ အမေဆု ကျမ်းမာပါစေချမ်းသာပါစေအသက်ရှည်ပါစေ
ဒီကနေ့ က စပြီး ဖာချရင်
တိုင်းရင်းသူ လူမျိုးကွဲတွေကို ” ရှောင်”
ငါးဦး ကော်မတီ ဖွဲ့ 
အဖွားကြီးလည်း လူဖြစ်လို့လူထီးနဲ့ယူတာကို
မျိုးချစ်စိတ် ဘာညာ သာတကာ ချီးထွက်အောင် အော်နေမယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ
ဒီကောင်မျိုးတွေက ဒီလိုတော.ရှောင်နိုင်မယ်မထင်ဘူးကိုရင်နိဂိမိရေ ….
ပါးစပ်ကသာမျိုးချစ်တာ ၊ ဒါမျိုးကျရင်တော. ဘာလာလာ ဒေါင်းပြီးသားဘဲ တဲ.
real burmese man says:
မသိလို့မေးပါရစေဗျာ..အခုပြောနေကြတဲ့ လူတွေက ဘာတွေလုပ်ကြတာလဲ…ဘာလူမျိုးတွေလဲ ခင်ဗျ…ဘယ်နိုင်ငံမှာနေတာလဲခင်ဗျ…ခင်ဗျားတို့ပြောသလို လူလူချင်းမခွဲခြားဘဲ ဒီအတိုင်းအခွင့် အရေးတူဆိုရင် ဘယ်မှာနိုင်ငံတွေ၊လူမျိုးတွေခွဲမလဲခင်ဗျ၊ အတူတူပေါင်းနေကြမှာပေါ့…လူဆိုတာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာက ဟောခဲ့တယ်လေ…သဲလဲသီးလေးတွေလို သူ့ အကန့် ကန့် နဲ့ သူပါတဲ့ ….တူရာတူရာပေါ့ဗျာ…အဲလိုဆိုရင် ဘယ်သူက(ဗိုလ်ချုပ်) ကိုယ့်နိုင်ငံလာအုပ်ဆိုးနေတဲ့ သူတွေကို အပင်အပန်းခံတိုက်ထုတ်နေမှာလဲ….လူလူချင်းပဲဆိုပြီး လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့ရင် အခုနေဆို….စဉ်းစားသာကြည့်လိုက်တော့ ….လူမျိုးဘာသာ ဘာမှတောင် သိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ စစ်မှန်တဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်လေးတွေတောင် သိလိုက်ရမှာမ ဟုတ်ဘူး…မိတ်ဆွေတို့ ရေ….ပြန်စဉ်းစားကြည့် ကြပါအုံး….တော်ကြာ globalဆိုပြီး ရှိသမျှ အပိုတွယ်သွားကြလိမ့်မယ်ဗျို့….ရင်လေးမိတယ်ဗျာ…အတွေးအခေါ်တွေက ခေတ်မီလွန်းပြီး…အမျိုးဘာသာ ၊သာသနာဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူးကွာ လို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ ဗျာ….နောက်က ငယ်သားတွေ အတုခိုးမှာ စိုးလို့ ပါ…မိတ်ဆွေတို့ ရေ…ကျွန်တော် တောင်းပန်ပါတယ်….အနူးအညွတ်ပါပဲ..
မင်းတို့ တွေဘာပြောပြော ဖြစ်ခဲ့တာကဖြစ်ခဲ့ပြီ မင်းတို့ သားသမီးတွေ မင်းတို့ အမျိုးတွေ ဒေါ်စုလိုမဖြစ်စေနဲ့ 
ဒေါ်စုလည်း သူ့ မဟာအမှားကိုသူသိမှာဘဲ ပြင်လို့ ရရင်မင်းတို့ ပြင်ပေးကြ ..
ဒီမြေမှာနေ ဒီနိုင်ငံမှာနေပြီး မြန်မာလူမျိုးဖြစ်လျှက်နဲ့ကို ရီးယားကကောင်တွေကို အိမ်မှာနေရင်းလင်တော်ချင်နေတဲ့မင်းတို့ ရဲ့ နှမတွေ မင်းတို့ ရဲ့အမတွေ မင်းတို့ ရဲ့(…….)တွေကို နိုင်အောင်ထိမ်းကြအုံး မင်းတို့ ကိုယ်တိုင်ကရောလူမျိုးသန့် ရဲ့ လား ပြန်စဉ်းစားကြပေါ့ ။
မြန်မာနိုင်ငံလို့ စဖြစ်ကတည်းက ထားပါအုံး လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို
UK မှာအမေရိကန်မှာဘယ်ခေါင်းဆောင်ကမိန့် ခွန်းပြောဘူးလို့ လဲ သူ့ အဖေတောင် ပြောဘူးလို့ လား
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာငါတို့ နိုင်ငံ မှာအာရှမှာခေါင်းဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်
ဦးသန့် ဟာလည်းUN အတွင်းရေးမှုးအနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ် ဦးသန့် ပြီးရင်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာငါ့တို့ နိုင်ငံရဲ့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဘဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရှိနေ
လို့ ငါတို့ နိုင်ငံကို အလေးထားနေကြတာ ငါပြောတာကို ငြင်းလို့ ရရင်ငြင်းကြပေါ့ ဒါပေ မဲ့ပြန်စဉ်းစား။
ဒီမိုကရေစီလိုချင်တာ စည်းနဲ့ ဘောင်နဲ့ဥပဒေနဲ့နေချင်လိုကွ လုပ်ချင်တာလုပ်ဖို့ မဟုတ်ဘူး
စည်းမရှိဘောင်မရှိ ဥပဒေကိုကျောပေးပြီးနေခဲ့လို့ငါတို့ နိုင်ငံငါတို့ လူမျိုးတွေ အောက်ကျနောက်ကျ နေရတာမင်းတို့ လဲသိတယ် ။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်နိုင်အောင်လုပ်နေကြတာကို ဟိုဟာကြောင့်အပုပ်ချဒီဟာကြောင့်အပုပ်ချ နဲ့မင်းတို့ မို့ မရှက်တယ် မင်းတို့ ဟာ ဟိုအထဲကမှန်းသိသာတယ် ။
ငါတို့ ကတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုလဲချစ်တယ် သူ့ သမီးကိုလဲချစ်တယ် အခုလုပ်နေတာတွေကိုလဲ
ထောက်ခံတယ် မင်းတို့ ပြောချင်တာပြော ဂရုမစိုက်ဘူး ။ နောက်ကို ဒီလိုပို့ စ် တင်မလာနဲ့ ကွာ
ဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ပလေ့စေ၊ 123 သတိထား။
search 123ညီလေးရေ နိုင်ငံရေးငါမသိဘူးကွာ အရီးကြီးခေတ်ဆိုတာ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ငါကိုယ်တိုင်မျိုးမစစ်ပေမဲ့ လူစစ်ဖို့ လူပီသဖို့တော့လိုတယ်ကွာ မင်းကောလူသားတွေအတွက် သွားကြားထိုးတံ တန်ဘိုးလောက် လုပ်ပြီးပြီလါး၊ အာချောင်မယ်ဆိုဝေးဝေးနေပေးပါ၊
ငါကပြည်ဖျက် ဝေလေလေစုန်းပြူးတွေသတ်တယ်၊ ဖုန်းဆက်လိုက်ပါ ငါလါတွေ့ပါမယ်။